ခုတလောဘာတွေ ရေးရမှန်းမသိ.. အသောက်ကလေးနည်းနည်းဖက်တော့လက်ကလည်းသိပ်မမှန်ချင်ဘူး..ခေါင်းကလည်း တရုတ်မအကြွေး၊အင်တာနက်အကြွေး၊ဘီယာကြွေး၊အထွေထွေအကြွေးတွေမှတ်ရလွန်းလို့ ရေးစရာစာတွေထည့်ဖို့memoryနေရာအလွတ်မရှိတော့ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြဲသဲပြီးရေးစရာကုန်ကြမ်းရှာလည်း ခပ်ညံ့ညံ့ကောင်ဆိုတော့ရေးစရာဘာမှမတွေ့ ဒါမှမဟုတ် လမ်းရှေ့ကဖြတ်သွားဖြတ်လာတရုတ်မတွေကိုပဲ “ငါကုန်ကြမ်းရှာတာပါဟာ” ဆိုပြီး ထိုင်ကြည့်နေရင်ကောင်းမလား? အဲလိုတော့မဖြစ်ချေဘူး ကံမကောင်းရင် နှာဘူးလို့အထင်ခံရနိုင်တယ် ရေးစရာမရဘဲ ဆွေးစရာတွေဖြစ်သွားမယ်။ မထူးပါဘူးလေ...ရေးစရာမရှိတဲ့အတူတူ ပေးစရာလေးတွေ မျှကြည့်ရတာပေါ့ ဟိုဒီလျှောက်သွားရင်းတွေ့လာတာ ဘာမှအဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး သာမန်သုံးနေကျg-talkလိုမဟုတ်ဘဲသူကပန်းရောင်လေးနဲ့ပါ မိန်းကလေးတွေအကြိုက်ပေါ့ဗျာ ဒီမှာ downနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကအပျော်စန္ဒယားတီးတဲ့ဆော့ဝဲဗျ ကျွန်တော်ကစန္ဒယားတီးတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်တော့ တီတီတောင်တောင်နဲ့ရမ်းသမ်းပြီးနှိပ်နေတာပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုတော့နားထောင်လို့အကောင်းသား..ခုနောက်ဆုံးကအသေးစားDJဗျ ခက်တာကသီချင်းကိုremixလုပ်ဖို့တပုဒ်ပုဒ်ရွေးပြီးတိုင်း ဒီ your previously selected song file is restricted to limited usage. the digital rights management license of that song file does not allow audio processing.
please refer to your song file vendor's user license agreement ဆိုတဲ့ စာကြီးတွေပဲပေါ်ပေါ်ပြီး သီချင်းတွေပြန်ကျသွားတာတော့ဆိုးတယ် ကျွန်တော်ကကွန်ပြူတာလည်းမတတ် ၊ ဘိုလိုလည်းမကျွမ်းဆိုတော့ ထစ်ခနဲ“ဖြစ်အကုန်ရပ်သွားရော ဘာမှဆက်မလုပ်တတ်ဘူး ကိုယ်ညံ့ကြောင်းကိုကိုယ့်ဘလော့ထဲထည့်ထည့်ဖောရတာလည်းသိပ်တော့မနှိပ်ပါ...သိရင်လည်းပြောပေးကြပါဆရာသမားတို့” ။။
ပြိုင်ဘက်မရှိ..နံပါတ်(၁)ပါ .. ဘယ်ရမလဲ..စန္ဒယား တစ်ခါမှ မတီးဖူးလို့ ယူသွားပစ်လိုက်တယ်..း)